Ny herinandro lasa teo vao nifanjevo niaraka tamin’ny mpitandro filaminana avy amin'ny Borigady Andriadapy izy ireo. Nahazo fampitam-baovao mantsy ny zandary fa mihaodihaody any Ilakaka izy ireo ka natao ny vela-pandrika ary nahazoana vokatra. Tratra niaraka tamin'izy ireo ihany koa ny taratasy famotsiana omby halatra. Fantatra ihany koa fa misy tompon’andraikitra tafiditra sy voasaringotra amin'ity raharaha halatra omby ity. Raha ny loharanom-baovao any an-toerana, eo am-panatanterahana ny famotorana amin’ireo tompon’andraikitra isan’ambaratongany voakasika ny mpitandro ny filaminana. Tafiditra ao anaty fanadihadiana ireo manampahefana any ifotony tahaka ny any amin’ny fokontany sy ny kaominina ary ny distrika, hatrany amin’ny lehiben’ny faritra sy ireo delegem-panjakana mpiandraikitra ny boriborintany sy ny veterinera. Efa natolotra avy hatrany ny fampanoavana tao Betroka izy dimy lahy, taorian'ny famotorana nataon'ireo zandary ary efa naiditra am-ponja vonjimaika miandry ny fitsarana azy araka ny loharanom-baovao any an-toerana.